निर्मला पन्तको मुख्या हत्यारा भेटियो, बलात्कारपछि हत्या गर्ने यस्तो योजना बनाइएको खुलासा ( हेर्नुहोस् यो भिडियो ) – Nepali Profile
निर्मला पन्तको मुख्या हत्यारा भेटियो, बलात्कारपछि हत्या गर्ने यस्तो योजना बनाइएको खुलासा ( हेर्नुहोस् यो भिडियो )
Posted on August 30, 2018 by रोशन राना
काठमाडौं। यो समाचार युटुबमा राखिएको भिडियोमा लेखिएको टाईटल र फोटो जस्ताको तस्तै राखेका छौ ,भिडियो अन्तेमा हेर्नुहोला १३ वर्षीया निर्मला पन्तकी आमा कञ्चनपुर भीमदत्त–१८ उल्टाखाममा चनाचटपटे पसल चलाउँछिन् । निर्मलासँगै कक्षा ९ मा पढ्ने रोशनी बम ९ साउनमा पसलमा आएकी थिइन् । विज्ञानको नोट बनाउनुपर्ने भन्दै निर्मलालाई भोलिपल्ट आफ्नो घरमा आउन अनुरोध गरिन् । उनले निर्मलाकी आमासँग पनि अनुमति मागिन् । रोशनीले २० रुपैयाँको चटपटे किनिन् र आफूसँग पैसा नभएकाले भोलिपल्ट निर्मलासँग पठाइदिने वचन दिएर बिदा भइन् । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार छापेको छ ।
प्रश्न : एउटै कक्षामा पढ्ने भए पनि निर्मलाभन्दा रोशनी ५ वर्ष जेठी हुन् । बाबुआमा दार्चुलामा जागिर गर्छन् । कञ्चनपुरमा दुई बहिनी मात्र बस्छन् । उनको आर्थिक अवस्था चटपटेको २० रुपैयाँ तत्काल तिर्न नसक्ने होइन । आशंका के छ भने रोशनी बमको घरमा भोलिपल्ट कोही मान्छे आउँदै थियो र उसैका सामु निर्मलालाई प्रस्तुत गर्न यो योजना बनाइएको थियो । उनको घरमा सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरूको आउ–जाउ हुने गरेको छिमेकीहरूको भनाइ छ । यो आशंका असत्य साबित गर्न पनि प्रहरीले रोशनी र बबितालाई नियन्त्रणमा लिएर बयान लिनुपथ्र्यो । प्रहरी प्रवक्ता शैलेश थापा नै भन्छन्, ‘रोशनी र बबिता बममाथि अनुसन्धान भएको पनि भेटिएन । त्यसैले अनुसन्धानमै आशंका उठेको छ ।’
सन्दर्भ २ : अनायासै लासको प्रसंग
१० साउनको ११ बजे निर्मला साइकल चढेर रोशनीको घरतर्फ लाग्छिन् । निर्मलाको घरभन्दा करिब २ किमि टाढा छ रोशनीको घर । उनी साँझसम्म पनि घर फर्किनन् । छोरी खोज्दै आमा रोशनीको घर पुगिन् । उनले गेटबाटै रोशनीलाई बोलाइन् । तर, दिदी बाहिर आइन् । निर्मलाबारे सोध्दा ‘तिम्री छोरी त २ बजे नै यहाँबाट हिँडेकी हुन् । अम्बा पनि लगेकी छिन् । अहिलेसम्म घर नपुगेकी भए पोइल गई होला’ भन्ने जवाफ दिइन् । निर्मलाकी आमा रिसाउँदै भित्र पस्न खोजिन्, तर बबिताले रोकिन् ।
निर्मलाकी आमा घर फर्किइन् । साँझ ८ बजेसम्म पनि छोरीको पत्तो नलागेपछि उनी वडा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन पुगिन् । तर, प्रहरीले खाना खाइसकेर सुत्ने वेला भएको भन्दै उजुरी लिन इन्कार ग-यो । फोटो लिएर भोलिपल्ट आउन भन्दै निर्मलाकी आमालाई फर्काइदियो । भोलिपल्टसम्म पनि पत्तो नलागेपछि निर्मलाकी आमाले छिमेकीसँग हारगुहार गरिन् ।
स्वःस्फूर्त जम्मा भएका स्थानीय रोशनीको घरमा जम्मा भए । त्यहीबीचमा दौडिँदै आएका एक स्थानीयले निर्मलाको साइकल भेटियो भन्ने जानकारी दिनासाथ बबिताले तत्कालै भनिन्, ‘साइकल भेटियो भने लास पनि त्यतै होला नि !’प्रश्न : हराएकी निर्मलाको खोजी भइरहेको थियो, तर बबिताले अनायासै लासको प्रसंग कसरी ल्याइन् ? निर्मला जीवित छैनन् भन्ने कुरा उनलाई कसरी थाहा भयो ? प्रहरीले यसतर्पm ध्यान दिएन ।
सन्दर्भ ३ : अम्बाको बोट जो ढल्यो – निर्मलाको मृत शरीर उखुबारीमा फेला प-यो । उनको शरीर भिजेको थियो । एउटा चप्पल पनि त्यही भेटियो । सँगै भेटियो, उनले कोठाबाट लिएर गएको बिज्ञान बिषयको पुस्तक । घटना भएको भनिएको रात मुसलधारे पानी परेको छ । तर, पुस्तक भिज्न सकेको छैन । मृत भेटिएकी निर्माणको शरिर पुरै पानीले भिज्नु तर, पुस्तक नभिज्नु कसरी हुन सक्यो ? कतै पुस्तक पछि लगेर फालिएको त होइन ?
यस तर्फ प्रहरीको अनुसन्धान केन्द्रीत भएन ।–निर्मालाको शवसँगै अम्बाका केही दाना पनि वरामद भए । प्रहरीले मुलुल्कामा अम्बा भेटिए पनि उल्लेख गर्यो । घटना भएको केही दिनपछि अम्बाको प्रसंग उठ्यो । यस बिषयमा प्रहरीले बबितासँग सोधपुछ गर्यो । हाम्रो घरमा अम्बाको झाङ थियो । त्यहीँबाट टिपेर उसलाई दिएको बताइन् । तर, बबिताको घरमा घटना भएको ६ दिनपछि अम्बाको झाङ काटेर मिल्काई सकिएको छ । उक्त अम्बाको झाङ एकाएक किन काटियो ? प्रहरीको अनुसन्धान यस तर्फ पनि मोडिएन ।
सन्दर्भ ४ : स्थानीयका अनुसार घटना भएको साता दिन पछि बबिताले घरको कोठामा रङ लगाएकी छिन् । जबकी बबिता र रोषनीलाई त्यस घरमा बस्न असुरक्षित भएको भन्दै प्रहरीले आफ्नै कार्यलयमा लगेर राख्ने र बेलुका सोही घरमा छाड्दै आएको छ । यत्रो तनावकाबीच बबिताले आफ्नो घरका कोठामा किन रङ लागाइन् । प्रहरीले यस तर्फ पनि ध्यान दिएन ।
सन्दर्भ ५ : घटनाको करिब सात दिनपछि प्रहरीले कन्चनपुरकै १७ बर्षीय दिपक नेगी र कैलालीका दिपक घर्तीमागर पक्राउ परे । स्थानीयका अनुसार पक्राउ परेका नेगी एचआईभी संक्रमित हुन् । उनी शारिरिक र मानसिक दुवै पक्षबाट कमजोर छन् । त्यस्तै पक्राउ परेका घर्तीमागर पनि मानसिक सन्तुलान ठिक नभएको व्यक्ति हुन् । घटनाको २६ दिन पछि प्रहरीले अभियुक्तका रुपमा दिलिपसिंह बिष्ट पक्राउ गर्यो । बिष्ट पनि मानसिक सन्तुलन ठिक नभएका व्यक्ति हुन् । प्रहरीले बलात्कार पछि हत्या गरिएको जस्तो जघन्य अपराधमा मानसिक अबस्था बिग्रिएकालाई मात्रै किन अभियुक्त बनाउन खोज्यो ? घटनाको सात दिनपछि पक्राउ परेका नेगी, घर्तीमागर र अहिले अभियुक्त भनिएका बिष्ट तीनै जना शरिरिक र मानसिक अवस्था बिग्रएका भेटिनु संयोग मात्रै होइन । तर, यस तर्फ अनुसन्धान केन्द्रीत हुन सकेन ।
सन्दर्भ ६ : घटनाको २४ दिनपछि प्रहरी निर्मालाको बुबा कहाँ पुग्यो । घटना स्थल निरीक्षण गर्नु पर्ने भएकाले सँगै हिड्न उनलाई भनियो । उनी प्रहरीको भ्यानमा चढे । घटना स्थल पुगे । निरीक्षण प्रहरी पनि खटिए । निरीक्षणको केही मिनेटमै प्रहरीले घटना स्थलबाट सर्टबाट च्यातिएको खल्ती भेटायो । सोही ठाउँमा फेरी प्रयोग गरिएको कण्डप पनि भेटियो ।
जबकी उक्त ठाउँमा शव भेटिएकै दिन मुचुल्का उठाउने क्रममा प्रहरीले ब्यापक सर्च गरेको छ । त्यस बेला न कण्डप भेटिएको छ । सर्टको टुक्रा नै । पछि सिआईबी टोली पनि घटना स्थल निरीक्षण गर्न पुगेको छ । उसले पनि घटना स्थलबाट कण्डम, सर्टको टुक्रा केही भेटएको छैन । घटना भएको २४ दिनपछि प्रहरीले घटना स्थलबाट कसरी कण्डम र सर्टको टुक्रा भेटायो । अनुसन्धान यसमा गरिएन ।
–अभियुक्तका रुपमा पक्राउ परेका दिलिपसिंह बिष्टका परिवारले घटना स्थलमा जुन सर्टको टुक्रा भेटिएको भनिएको छ, त्यो सर्ट प्रहरीले बिष्ट पक्राउ परेपछि मात्रै घरबाट लगेको भनेका छन् । यस्तो कसरी हुन पुग्यो ? शंका यहाँ छ ।–स्थानीयका अनुसार बबिताको घरमा नेपाली सेनाका अधिकृत, प्रहरीका अधिकृत मात्र नभई भारतबाट कन्चनपुर घुम्न आएका भारतीय नेता पनि बाक्ले रुपमा जान आउने गर्थे ।
बबिता न राजनीति गर्छिन् । न ब्यापारी हुन् । कुनै सरकारी ओहदामा पनि उनी छैनन् । न कुनै आईएनजीओ र एनजिओमा नै कार्यरत छिन् । तर उनका घरमा हाइ प्राफाइलका व्यक्ति आउ जाउ किन गर्छन् ? निर्माला हत्याको उपज कतै यस्तै व्यक्ति त होइन ? यसमा प्रहरीले किन अनुसन्धान गरेन ? उनको कल डिटेल अध्ययन गर्दा धेरै रहस्य खुल्न सक्थ्यो । तर, यसो किन गरिएन ? शंका यहाँ पनि छ ।
निर्मला पन्तको मुख्या हत्यारा भेटियो, बलात्कारपछि हत्या गर्ने यस्तो योजना बनाइएको खुलासा ( हेर्नुहोस् यो भिडियो ):
निर्मला हत्या प्रकरणमा निर्दोश किशोरीलाई समेत चरम यातना दिएको रहेछ प्रहरीले (भिडियो)मलेसियाकी तमिल मूलकी युवतीसंग नेपालीले गरे बिहे : तमिलकी छाेरी, नेपाली बुहारी, नेपाली प्रस्टसंग बोल्छिन् (भिडियो)